Vehivavy namorona servieta afaka mamantatra ny zava-pisotro misy rongony
Niharan’ny herisetra ara-pananahana sy fanolanana i Danya Sherman, satria nisy nanisy rongony ny zava-pisotrony izay sendra navelany teo ambony latabatra vetivety.
Satria tsy izy ihany no niharan’ny toy izany dia nitady fomba azo hamantarana izy, raha nisy nanisy rongony ny zava-pisotro iray ao anaty vera na tsia. Namorona ny antsoina hoe : KnoNap ary izy, izay karazana servieta toy ny mahazatra ihany raha jerena, saingy vitan’izy ity ny mamantatra karazana rongony 26 amin’ireo 40 tena fampiasan’ny mpanolana. Asiana indroa na intelo mitete amin’izay zava-pisotro ahiana ho nisy nanapoizina fotsiny eo ambonin’ilay servieta dia miova loko avy hatrany raha vao misy singa ahiahiana ao anatin’ilay zava-pisotro. Marobe sahady ireo manohana ity tetikasan’i Danya ity. Nanolotra vola mitentina 10 000 $ ho azy ny oniversite George Washington, izay toeram-pianarany. Nanome fanampiana 50 000 $ ho azy koa ny hetsika Women in the World Salon mba hampivelarana ny orinasany, izay hamokatra betsaka ity sevieta ity. Nomena azy koa ny anaram-boninahitra Toyota Mother of Invention.